Accueil > Gazetin'ny nosy > Mpiasam-panjakana : Voakenda roroka ny ivelan’Antananarivo
Mpiasam-panjakana : Voakenda roroka ny ivelan’Antananarivo
Isan’ny nahavelom-bolo ny mpiasam-panjakana ny filazana tamin’ny fotoana andro fa “ny volam-panjakana no iantohana ny fitsaboan-tenan’ny mpiasampanjakana raha tratry ny tsy fahasalamana izy”. Mitohy mandrak’ankehitriny izany fa mba tsy nisy nanafoana.
Misy indrokely anefa eo amin’ny fampiharana azy io. Tsy maintsy mandoa mialoha ny lany, indrindra fa amin’ny vidim-panafody, ny marary, ary aorian’izay vao mikarakara ny fanoneran’ny fanjakana azy. Tany ampiandohana dia nanaiky niantoka ny lany avy hatrany ihany ny toeram-pitsaboana saingy taty aoariana dia nanda izany ny maro satria manahirana be, elabe vao voaonitry ny fanjakana izy ireny. Dia novaina an’io hoe “manefa mialoha ny lany ny mpiasampanjakana ka izy no mitaky ny fanonerana azy aty aoriana”.
Mbola mitoetra hatrany io fanonerana maharitra elabe io, ka zary mitera-pahasahiranana ho an’ilay mpiasampanjakana. Ny vola fandrainy na karamany rahateo, efa kely, fa tsy hoe ambonimbony ka na somary miandry aza, tsy dia maninona.
Ny mampitaraina ny mpiasampanjakana ivelan’Antananarivo izao dia io fahasamihafan’ny fitantanana io satria ny eto Antananarivo dia misitraka fanamaivanana ny vesatra amin’ny fomba maro ny mpiasampanjakana fa ny any ivelan’Antananarivo kosa dia tena mifofo volo satria maharitra dia maharitra vao voaonitry ny fanjakana ny lany tamin’ny fitsaboan-tena.
Iantsorohan’andraikitra amin’ny famahana izany olana izany ny ministeran’ny vola sy ny ministera mampiasa ilay mpiasampanjakana.
Tokony tsy hadinoina fa na inona na inona esoeson-teny sy fandrabirabian’ny olona sasany ny mpiasampanjakana dia azo ambara kosa fa raha tsy eo izy ireny dia tsy misy fiainam-pirenena mihodina sy mandeha eto, ary ny vahoaka dia ho sahirana raha tsy misy mpiasampanjakana mikarakara ny filàny any anivon’ny sehatr’asam-panjakana na biraom-panjakana. Ny fanatsarana ny fomba fiasa, mandavan-taona.